Cagaarshowga B (Hepatitis B)
Author Topic: Cagaarshowga B (Hepatitis B) (Read 93900 times)
« on: January 24, 2008, 01:33:50 AM »
Akhriso qoraal ku saabsan Howlgabka Beerka: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,5648.0.html
WAA MAXAY CAGAARSHAWGA C?
Hadii aad qabtid wax su'aalo ah iigu soo dir halkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?board=31.0
Re: Cagaarshowga B (Hepatitis B)
« Reply #1 on: November 15, 2011, 12:21:23 AM »
waan idin salaamay akhyaarta ilahay haydinka abaal mariyo dadaalkiinaa aaad iyo aad ayaad u mahadsantihiin
suaal ayaan rabaa inaan idin waydiiyo fadlan qofka qaba cagaarshow B 1) cunooyinkee ayaa u fiican beerkiisa
ama 2)cuneeyinkee ayaa u fiican in uu iska ilaaliyo si beerkiisa buka u daryeelo
3) cuneeyinkee ayaad kula talin lahaydeen inuu cuno ama iska ilaaliyo aad iyo aad ayaad u mahdsantihiin walaalyaal.
« Reply #2 on: November 21, 2011, 08:23:54 PM »
Cunno khaas u ah dadka qabo cagaarshowga B ma jirto laakiin maadaama cunno walba iyo daawo walba aad qaadatid ay maraan beerka si looga shaqeeyo, waa in cunnooyinka culeeska ku ah beerka iyo daawooyinka oo idilba in la iska ilaaliyo si beerka uusan u hawlgabin.
Talooyinka aan ku siin lahaa waa:
1- Cun cunto isku dheelli tiran
2- Ka fogow cunnada dufanka ku badan tahay
3- Badso cabitaanka iyo cunnada biyaha u badan sida qaraha/xabxabka
4- Iska ilaali cusbada aad u badan.
5- Daawo oo dhanba ha u dhawaanin xittaa haddii ay noqoto Paracetamol.
« Reply #3 on: August 09, 2017, 06:02:05 PM »
xaqiiqda HBV ama Cagaarshow B
1. somalia aad buu ugu badan iyo guud ahaam geeska africa
2 . malaha wax dawo ah oo effective ah ujeedada HBV loo daweeyo waa in layareeyo HBV DNA ana Viral Load ka si looga hortago replication ka virus ka cellasha Beerka.
3 . dadka qaba badan kood waa dad yaraantoodii uu ku dhacay ama ku dhashay qofka dhalinyarta ah ama difaaciisu fiican yahay wax khatar ah kuma keeno dhiigiisa wuu ka baxaa.
4. ruuxa qaba cagaarshow baadhitaanada uu u baahan yahay waxaa kamid ah FibroScan oo sheega heerka beerkiisu dhaawaca u gaystay viruskan viral load oo ah baaxada viruska kujira dhigiisa oo muhiim u ah marka ruuxa daawada lasiinayo.
5 ruuxa qaba HBV waa laba mid uun waa virus replication kiisu waa Active ama Inactive.
6. HBV wuxuu cadaadis saraa immunity ga qofka, si uu ugu sii dhex nolaado qof ka.
7. dawo la qaato oo ka saaraya qofka wakhti xaadirkan majirto balse dawooyin ayaa laga shaqaynayaa waxaana laga qabaa rajo fiican, madaama dawoyinkaas tijabadoodii guul ku dhamaatay balse wali tijaabaa kusocota.
8 cagaarshow C oo sida cagaarshow B u dhib badnaa dawasiisa waxaa la soo saaray 2014 waxaana rajo fiican laga qabaa inuu cagaarshow B ku xigi doono dawadiisa.
9. sanadihii ugu danbeeyay khaasatan 2016 waxaa la ogaaday sababta cagaarshow B ugu adkaatay dawooyinka NUCs ka inay meesha ka saraan, iyo meesha ay ka imanayaan HbsAg oo ah particles yar oo non infectios ah balse ah kan difaaca cunaga kudhagan waxaana la ogaaday HbsAg marka bloodka laga nadiifiyay in Hbs Ag cusub uu soo saareen infected liver cells kasoo lagu magacaabay DNA integrated oo la wareegay shaqadii oo saa daayay HbsAg si horleh u aamusiiyay immunityga.
10.daawada cagaarshow b laga leeyahay ayaa ah in qofka difaaciis dib losoo noleeyo si uu iskaga celiyo HBsAg.
11. hbs Ag waxa lagu cabiraa iu/ml hadii uu yaraado waxay ka dhigan tahay ruuxaas difaaciisa ayaa dib usoo noolaanaya waxayna u dhawdahay inuu difaaciisa guulaysto.
12. mar mar ruuxu difaaciisa wuu guulaystaa isagoon wax dawo ah lasiinin wuuna ka adkaadaa HbsAg inkaste lagu tilmaamo inay yihiin dad aad u yar oo nasiib badan, WHO waxay ku sheegtay dadkan 1-2% per year.
13. rajada laga qabo aad bay u fiican tahay in dawo loo helo madaama xog buuxda laga helay oo sanad kaste soo bandhigto ILC kaas oo warbixintii ugu muhiimsanad ah soo bandhigtay ArrowHead taas oo horsoodi doonta in dawo la helo wakhti dhow dadkoo dhan gaadha.
14. jaadka wuu u daran yahay Cagaarshow B haduu ruuxu cuno jaad isaga oo cagaarshow B hayo wuu dadajiyaa dhaawaca beerka. waxaa kale oo fiican in la yareeyo salooda suba iyo xaydha waxyaaba ku badan.
15.caanaha geela aad bay ugu fiicam yihiim cagaarshow B. xog laga sameeyay laga sameeyay wadanka China ayaa dad qaba cagaarshow B loo qaybiyay labo qaybood bal si loo ogaado caanaha geela waxay soo biiriyeen , qolo ayaa lasiiyay hal littir oo caano geel ah maalin kaste kuwa kalana cuntadooda caadiga ahayd ayaa la faray inay sida caadiga ahayd isaga cunaan. waxaana warbixintu sheegaysaa in caanaha geela dadkii lasiiyay dad badan noqdeen negative ama dhigooda laga waayay cagaarshoe B, qay kamid ahna LFT uu aad u fiicnaaday.
warbixibta waan idinla wadaagi karaa cidii rabta .
waxaa kale oo cagaarshow B u fiican dawooyin uu rasuulku csw inoo sheegay inay dawo yihiin,macluumaad intaa sii dhaafsiisan waad raadin kartaa
« Reply #4 on: November 10, 2019, 01:15:07 PM »
Asc waxan rba in aan idin weydiyo sual ah waxan ugalmoday qof qaba hepatitiska marki aan ogaday inaw qabo wan istalay waxana qatay labo cirbad ti sedexad ayaa idhiman .marka hda waxan darema lafo garaac iyo kala goysyada oo ixanuna cabsi ayana daremayan ma qadi karaa marka
Views: 11122 September 27, 2011, 08:35:06 PM
Views: 6306 August 08, 2011, 08:09:33 PM
Started by BadbaadoBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 11726 August 13, 2010, 06:41:30 PM
Views: 21075 November 10, 2010, 07:52:11 PM
Su'aal: Xanuunka Hepatitis B ma laga bogsoon karaa?
Started by Cabdiqani_ysfBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 9903 March 30, 2015, 01:27:58 PM